Forbes | Infomala
उपेन्द्र महतो फर्ब्सको सूचीमा अट्दैनन् ?
फर्ब्स म्यागजिनले विनोद चौधरीलाइ बिलेनियरको सूचीमा राखेपछि नेपाली बिलेनियरको खोजीनीति बढेको छ । गैरआवासिय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोलाइ नजिकबाट चिन्नेहरू विनोद चौधरी समाविष्ट सूचीमा महतोको नाम नहुनु प्राविधिक कुरा मान्छन् ।
फर्ब्सको अर्बपती सूचीमा नेपालबाट विनोद चौधरी र परिवार पहिलोपटक एक अर्ब डलर (८८ अर्ब रुपैयाँ)को सम्पत्तिसहित परेका छन्। चौधरी फर्ब्सको सूचीमा परेपछि नेपालमा अन्य अर्बपतिहरुको पनि खोजी हुन थालेको छ। के नेपालमा विनोद चौधरी मात्रै अर्ब पति छन् त?
तथ्यांक र सूचनालाई केलाउने हो भने अर्बपतीको सूचीमा गैरआवासिय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोलगायत अन्य केही नेपाली पनि पर्छन्। तर ती नेपालीले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा पछि सरकारी निकायबाट पर्ने अप्ठ्यारोलाई महसुस गर्दै सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन्। (more…)
Comments Off on उपेन्द्र महतो फर्ब्सको सूचीमा अट्दैनन् ?